मास्क फेसन ट्रेण्ड: सुन र हिरा जोडिएको महँगो मास्क !
१२ श्रावण २०७७, सोमबार २२:५१
एजेन्सी – विश्वलाई आतंक मच्चाइहेको कोरोना भाइरस महामारीले दुनियामा एक करोड ६० लाख भन्दा धेरै मानिसहरु संक्रमित भईसकेका छन् । करीब साढे ६ लाख मानिसको मृत्यु भैसकेको छ । कोरोना महामारीका कारण अहिले विश्वमा नाक–मुख छोप्ने मास्कको व्यापार निकै भईरहेको छ । विश्वका कति मुलुकहरुमा त आम मानिसहरुलाई मास्क लगाउनै पर्ने कडा नियम सरकारले बनाएको छ ।
जहिलेसम्म यो भाइरस विरुद्धको खोप बन्दैन तबसम्म मुख तथा नाक छोप्ने मास्क नै यसबाट बचावटको सबैभन्दा उत्तम उपाय मानिँदै आएको छ । जसका कारण दुनियामा मास्कको व्यापार चम्किएको मात्र छैन यो एक फेसन ट्रेण्ड समेत बन्न थालेको छ ।
विश्वमा अनेक आकार प्रकार तथा डिजाइनका मास्क बनिरहेका छन् । हालै भारतमा सुन जडित मास्क बनेको खबर आएको थियो । महंगो मास्कको भारतीय कदमलाई युरोपेली मुलुक बेल्जियमले पनि पछ्याएको छ ।
२० हजार रुपैयाँको मास्क !
बेल्जियममा यस्ता लग्जरी मास्क उत्पादन गरिएको जसको मूल्य ७५ युरोदेखि १६० युरोसम्म तोकिएको छ । जस अनुसार सबैभन्दा महंगो उक्त मास्कको मूल्य झण्डै २० हजार रुपैयाँ पर्नेछ । यद्यपि भाइरसबाट बँच्नका लागि यति महंगो मास्क आवश्यक नपर्ला । तर यो मास्क एक फेसन स्टेटमेन्ट बनिसकेको छ ।
हुनत मास्कका अनेक खाले डिजाइन प्रस्तुत गर्नमा बेल्जियम अगाडि नै छ । कोरोना भाइरस महामारीसँगै ब्रसेल्सका एकजना डिजाइनरले मेडिकल मास्कलाई चिक एक्सेसरीजमा बदलिदिए । ब्रसेल्सका स्टाइलिस्ट ओडे डी उल्फले एक स्कार्फ मास्क तयार गरे जसमा विभिन्न महंगा फाइबरहरुको प्रयोग गरिएको छ । त्यसखाले मास्कलाई लज्गरी सलसँग जोडिएको छ । डी उल्फले अस्पतालका लागि १५०० वटा मास्क बनाइसकेका छन् ।
फेसन कपडा तथा एक्सेसरी बनाउने ओलिभिया हेनटले अहिले मास्क बनाउने कार्यमा पनि आफ्नो प्रतिभा देखाइरहेकी छिन् । उनीले विभिन्न रत्न तथा सिल्क फ्लावर्स जस्ता सामानहरुको प्रयोग गरी मास्क बनाइरहेकी छिन् । ती मास्कको मूल्य न्यूनतम ७५ युरो पर्दछ । ओलिभियाका अनुसार यो मास्क दैनिक लगाउनका लागि होइन । कुनै पार्टी, बिहे वा विशेष समारोहका बेला त्यसलाई पहिरिन सकिन्छ ।
जसले लगाए सुनकै मास्क
कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्न भारतमा एकजनाले सुनको मास्क नै लगाए । पुनेका शंकर कुरहडे नामका ती व्यापारीले चार हजार अमेरिकी डलर मूल्य पर्ने मास्क लगाउन थालेका हुन्।
६० ग्राम सुनको उक्त मास्क बनाउन शिल्पकारलाई आठ दिन लागेको थियो। कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट जोगिन मास्क अनिवार्य भइसकेको बेला बजारमा विभिन्न प्रकारका विभिन्न मूल्यमा मास्क पाइन्छ। सुरूसुरूमा त धेरै ठाउँमा मास्कको अभाव पनि भएको थियो।
४९ वर्षीय ब्यापारी घरबाट बाहिर निस्किदा सुनका ब्रेसलेट, नेकलेस, औंठीलगायत गहना लगाउँछन्। समाचारमै कसैले चाँदीको मास्क बनाएर लगाएको थाहा पाएपछि उनले पनि सुनको मास्क बनाउन दिएका हुन्।
‘अहिले मान्छेहरू मसँग सेल्फी खिच्ने भन्छन्,’ उनले भने,’बजार जाँदा सुनको मास्क लगाएको देखेर उनीहरू अचम्मित हुन्छन्।’ भारतले अहिले सार्वजनिक स्थानमा जाँदा मास्क लगाउन अनिवार्य गरेको छ। भारतमा आइतबारसम्म ६ लाख ७५ हजार बढी संक्रमित छन् भने १९ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
हिरा लगाएर बनाईएको मास्क
कोरोना महामारीका कारण अहिले विश्वमा नाक–मुख छोप्ने मास्कको व्यापार निकै भईरहेको छ । विश्वका कति मुलुकहरुमा त आम मानिसहरुलाई मास्क लगाउनै पर्ने कडा नियम सरकारले बनाएको छ ।यस्तोमा मानिसहरुले बजारबाट किनेर वा घरमै बनाएर अनेक खालका मास्कहरु लगाउने गरेका छन् । मास्क अनिवार्य बन्दै गर्दा पछिल्लो समयमा यसले फेसनको रुप लिन थालेको छ ।
भारतको सुरतस्थित एक गहना पसलले हिराजडित मास्क बनाएर बेच्न सुरु गरेको खबर छ । यसअघि सुनजडित मास्क बेचिसकेको उक्त गहना पसलले तयार पारेका हिरायुक्त मास्कको मूल्य डेढ लाख भारुदेखि ४ लाख भारुसम्म पर्ने बताईएको छ ।
गहना पसले दिपक चोक्सीका अनुसार सरकारी निर्देशिका अनुसार नै मास्कहरु कपडाबाटै बनाइएको छ । कपडाको बीच बीचमा सुन र हिरा जडान गरिएको छ । पहेँलो सुन र अमेरिकन हिरा जडित मास्कको मूल्य डेढ लाख भारु तोकिएको छ । त्यस्तै सेतो सुन र असली हिरा जडित मास्कको मूल्य चाहीँ ४ लाख भारु पर्दछ ।
एकजना ग्राहकले घरबाटै गरिने बिहेका क्रममा बेहुला र बेहुलीका लागि विशेष खालको मास्क बनाइदिन आग्रह गरेपछि आफुलाई सुन तथा हिरायुक्त मास्क बनाउने आइडिया आएको दिपक बताउँछन् । ती ग्राहकको माग अनुसार उनले डिजाइनरलाई उपयुक्त मास्क डिजाइन गर्न लगाए र हिरा तथा सुन जडित मास्कको दुई थान उत्पादन गरे सुरुमा ।
बेहुला र बेहुलीका लागि बनाएको मास्क खुबै मन पराइएपछि उनले सुन तथा हिराजडित थप मास्क उत्पादन गरेका छन् । उनका अनुसार मास्कमा प्रयोग गरिएका सुन तथा हिरा त्यसबाट निकालेर अन्य गहनाका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । एजेन्सी